Hogaamiyaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo ka qeyb galay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii la doortay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in loo baahan yahay in xal loo helo doorashada Soomaaliya.
Madoobe ayaa sheegay in laga gudbay caqabadii hortaagneyd in doorasho ka dhacdo Soomaaliya, oo in muddo ah dib u dhac ku yimid, wuxuuna codsaday in wax laga qabto inta ka harsan waqtiga madaxweynaha.
Wuxuu carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in xal loo helo gobolka Gedo, taasna ay ahayd sababta ugu weyn ee uu u diiday inuu soo sharaxo musharixiinta, wuxuuna sheegay in lagu xalin karo maskax wanaagsan. dhigay
Sharafta madaxweynaha iyo mowqifkiisa ayaa ka hooseeya tan lagu xoojinayo gobolka Gedo, waxaana muhiim ah in gacanta DG Jubbaland dib loogu celiyo gobolkaas si ay u dhacdo doorashooyinka ay masuulka ka tahay. Waa sida uu yiri Axmed Madoobe.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in Jubbaland ay ka go’an tahay in doorashada dalka ay ku dhacdo jawi wanaagsan isla markaana la xaliyo dhamaan dhinacyada uu khilaafku u dhexeeyo si loo helo aakhiro waarta oo xilka haysa
Khilaafka ugu weyn ee u dhexeeya hogaamiyayaasha dowladda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland ayaa ah gobolka Gedo, maadaama xilligii dowladda ay diidday doorashadii Madoobe ciidamo la geeyay gobolka ugu dambeyntiina ay la wareegeen dhammaan degmooyinka gobolka.